AJAX အတွက် site ကောင်းလေးများ - MYSTERY ZILLION
AJAX အတွက် site ကောင်းလေးများ
မေ့နေတာတွေ ရှိသေးတယ်.. နောက်မှ ထပ်ရေးပေးမယ်နော်.. :106:
ကျွန်တော် လေ့လာခဲ့တဲ့ လမ်းကြောင်းကတော့
http://www.prototypejs.org/ က Library ကိုသုံးပါတယ်။
Serverside ကိုတော့ ASP.Net ကော၊ Rails နဲ့ကောလုပ်ဖူးပါတယ်။
AJAX လုပ်ရင် JSON (http://www.json.org/) အကြောင်းကိုလည်းနည်းနည်းသိရင်
ပိုကောင်းပါတယ်။ Data တွေကို String တွေထက် Object အဖြစ် Server to Client
မေးချင်လို့ပါ ... dotnet မှာတော့ AJAX Tool Kit ဆိုတာပါပြီးသားမို့ သိပ်ခက်ခဲစွာမသုံးခဲ့ရပါဘူး ..။
ခုလိုလာတာက classic asp page မှာ Data တွေကို ၁ မိနစ်တစ်ခါ refresh လုပ်ပြစရာလိုလာပါတယ် ..။ နည်းပညာအရလဲ dotnet မဟုတ်လို့ Ajax မပါ ပါဘူး ..။ page ကြီးက 1 Min တစ်ခါ လှုပ်စိ လှုပ်စိ ဖြစ်နေမှာကို မြင်ယောင်ကြည့်လို့ရတဲ့ အတွက် Ajax လေးသုံးချင်လာပါတယ် ..။ အရင်က မိနစ်သုံးဆယ် ကိုတစ်ကြိမ် Refresh လုပ်ပါတယ် မသိသာပါဘူး။
အဲဒါ နည်းပေးလမ်းပြလေး လုပ်ပေးကြပါလို့ တောင်းဆို အပ်ပါတယ် ခင်ဗျား..။ :77:
1) classic asp
2) SQL 2000
3) Windows Server 2000
မြန်မာ Dictionary မှာ ကိုမာ့ခ် လုပ်ပြခဲ့တဲ့ Ajax လေးကို စိတ်၀င်စားပါတယ် ... အဲဒီကနေ နည်းများယူနိုင်မလားလို့ တွေးနေပါတယ် .. :106:
ကိုစေတန်တို့ လဲ စမ်းသပ်ခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံလေးများ ပြောပြပေးကြပါဗျာ ... ။ :8:
ကို dotNetCrazy ရေ၊ ခင်ဗျားလိုချင်တဲ့ ပုံစံမျိုးကို ကျွန်တော် စမ်းကြည့်ထားပါပြီး။
Prototype ကို သုံးထားပါတယ်။
ASP file က http://www32.brinkster.com/kotharthar/backend.txt ပါ။
ASP နဲ့ SQL2000 ကို ODBC နဲ့ကိုယ့်ဖာသာချိတ်တယ်မယ်ထင်ပါတယ်။
Oh Amazine, fantastic job.
Thanks alot Ko Thar Thar, I got concept with your examples.
ခုသုံးထားတဲ့ Protptype ရဲ့ documentation ကိုဘယ်ကရနိုင်မလဲဗျာ အဲဒါဆို တခြား သုံးနည်းလေးတွေလဲ လေ့လာစမ်းသပ်လို့ရနိုင်တာပေါ့ဗျာ...
အဲ ဘယ် Prototype လဲဆိုတာလေးလဲ မစပါဦး
မှာ Download လည်းလုပ်၊ လေ့လာလို့လညး်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
AJAX သုံးတဲ့ အခါမှာ Text Data တွေအပြင် Object တွေကို Transfer လုပ်ချင်ရင် JSON
ကိုသုံးကြပါတယ်။ ASP အတွက် JSON Library ရှိမရှိမသိပါဘူး။
Rails မှာတော့ JSON အတွက် function တွေပါလို့ Object တွေကို ServerSide မှာကော
Clint Side မှာပါ အတူတူသုံးလို့ရလို့ အလွန်အဆင်ပြေပါတယ်။ အဲ...တော့ပစ်ချော်သွားပြီ။
AJAX ကို တော်တော်သိတာပဲ... ဆက်ပါအုံးဗျာ..
asp အတွက် JSON ရှိတယ်လို့ Google ကပြောလို့ ခု ဖတ်ကြည့်နေတယ်ဗျ .. ကျွန်တော့် လိုအပ်ချက်တွေ စမ်းသပ်လို့ရရင် ပြန်ပြီး ပြောပြပါ့မယ် ..။ ကျေးဇူး ..။
asp နဲ့ C# တွဲသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ အများကြီးရှိပါတ်။ json.org မှာ အောက်ဆုံးနားမှာရှိပါတယ်။
ကျနော်တော့ JsonFx ဆိုတာကိုသုံးဖူးပါတယ်။ မဆိုးပါဘူး။
ဟုတ်ကဲ့ ဖတ်ကြည့်နေပါတယ် .. လက်ရှိလုပ်ရမှာကတော့ C# ပါဘူးဗျ .. လက်ရှိ run နေပြီးသား web site မှာ Enhancement လုပ်ပေးရုံဘဲ .. တစ်ခုလုံးက classic asp နဲ့ လုပ်ထားတာဆိုတော့ ..။
ဟီး၊ I see
I only found one in json.org for asp then.
ကျေးဇူး အထူးတင်ပါသည်။ မှတ်ထားလိုက်ပါပြီ။
နောင်လိုရင် အသုံးတည့်မှာမို့၊ အားမှာ နည်းနည်းလေ့လာလိုက်ဦးမယ်။
ဟုတ် ... ကျွန်တော်လဲ ဒီမနက်က အဲဒီဆိုဒ်ကနေဘဲ ရှာတွေ့တာ .. ဖတ်ကြည့်ပြီး စမ်းကြည့်လိုက်တယ် .. အဆင်ပြေပါတယ် ။ ခုတော့ စမ်းသပ်ချက်လုပ်ကြည့်တာ နှစ်ကြောင်းဘဲ အသစ်ထပ်ထည့်လိုက်ရတယ် Ajax enable ဖြစ်ကရောဘဲ ... နိပ်သဟ။
ကိုသာသာနဲ့ ကိုမာ့ခ် တို့ကို ကျေးဇူးပါ။